Enye yezinkinga eyisisekelo Psychology iyona typology ubuntu. Iphayona ukuhlaziywa lolu daba kwaba Jung. Wazama ukulandelela kanye ukuhlonza ezahlukene izinhlobo zabantu kufanele bahlolisise lolu daba encwadini yakhe "Izinhlobo Psychological", egcwele zakudala kwengqondo. abanye ososayensi abaningi futhi babe nemibono yabo ngezigaba zabantu ngokuvumelana nezimfanelo ezithile.
Ezimweni eziningi, ubunikazi kubhekwa njengento yomkhakha owodwa ukuthi lihlukile abanye, hhayi nje ngobe ezifana izici ngazinye njengoba Ubumnene noma uhlamvu, kodwa futhi indlela eqondile ukuphila futhi bezibona imvelo kanye isimo, amagugu nokunye. N.
Jung ezihambisana umehluko typological nge izinto ezifana nokudlanga iyiphi ekusebenzeni kwengqondo futhi ukubusa omunye amayunithi ukwazi engqondweni imisebenzi ngabanye. Ngakho, yena wakhetha abantu extraverted futhi unkom 'idla yodwa. Uhlobo lokuqala - angabantu kuthambekele ngokuyinhloko ezicini wangaphandle kanye nemicimbi. Introverts, kunalokho, ukugxila emhlabeni ubusha bakho, imizwa, imizwelo. Ngakho Jung ukuqonda kulezi zici kuhlukile bona ngokuhunyushwa kanjani Eysenck ukuthi labelwe izinhlobo senhliziyo. Usosayensi, njengoba abalandeli bakhe zikholelwa ukuthi kungenzeka esigabeni introversion futhi extraversion kuthathelwe indawo ngesikhathi ukuphila. Ekuqondeni Jung sika - it is kuphela iphuzu ezogxila kulo ukwazi. A more enemininingwane idatha cwaningo izici ezifana izinhlobo Psychology njengoba nomphakathi futhi umahluko.
Esinye isici, ngokuvumelana Jung, ezithinta typology zobuntu - uwukubonakaliswa esiphezulu omunye wemisebenzi engqondo ezinkulu (ukucabanga, umuzwa, imizwa, emizweni). Ososayensi baye basikisela ukuthi ukuphila kwabantu omunye wabo kungaba ezinkulu, ezinye - asizayo, futhi laba ababili asele kungenzeka ampofu futhi senze kuphela ezingeni kobuthongo. Ngesisekelo le umbandela ukuhlukanisa typology elandelayo ubuntu. Hlobo of cabanga kwasekuqaleni, bezibona emhlabeni, kusekelwe ukwahlulela okunengqondo. Ukuze uhlobo ngokomzwelo libhekene nokuhlolwa lokumukelekako kuma. Umuntu enembile ngeke bathembele abazi ngokugcwele, kodwa nekuvisisa ephelele ukuthi iphuma ke. Thinta amaqiniso abaluleke ngabanye futhi esiqala sakhe. Njengoba ngayinye kulezi zinhlobo kungaba extrovert noma umuntu onamahloni, ubuntu typology ka Jung ikhomba futhi ephawula amaqembu 8 zabantu.
Ngaleso sikhathi, zama ukuhlukanisa abantu ngezibonakaliso yabo esingokwemvelo engqondo ezenziwe futhi Pavlov. He is ngaphakathi yocwaningo lwakhe ayizange esekelwe izinhlobo zabo labelwe womsebenzi sezinzwa. Ngo ngezigaba zakhe umuntu kungaba engqondo, Lesisemkhatsini kwezobuciko. Ekugcineni kukhona izici okuqonda zezwe kanye nenhlangano yizenzo zabantu. Lokhu typology ubuntu ihlukanisa indoda ecabanga, esibonakala ngekucabangisisa, ngo-ejulile analysis of kwenzekani kuye, ubuswa ekubeni nekhono lokuhlaziya futhi okunengqondo.
Ngo ubuntu wobuciko imizwelo evelele kakhulu, waba umcabango. Kubantu abanjalo, it libhekene iletha bese ulandela imizwa yakho. Uhlobo isilinganiso (abantu abanjalo kakhulu) kancane wabusa elilodwa noma kwenye uhlobo bezibona zomhlaba. Kulo mBhalo, indima enkulu udlalwa ngu imfundo isimo senhlalo yomuntu. Ngokuvamile izici ziqala ukuvela enkathini yobusha, lapho mhlawumbe eseziKhonjiwe kukhethwa umsebenzi esikhathini esizayo.
Theory, echaza iqembu labantu izici ezivamile alandisa, kabanzi abafundi bafunde nje kuphela isiqondiso yobuntu, kodwa futhi kwezomnotho, futhi ngokomthetho, nokunye .. Ngokwesibonelo, Psychology lowo okonile kusekelwe nje typology ngabanye.
Emhlabeni umuntu angikho: ukuthi kuyini, kanjani futhi kungani kubalulekile ukuthuthukisa
Makalale Beldiana Ihhotela 4 kuyoba ongenakulibaleka